Ciidamada Xoogga Dalka oo ku dhawaaqay iney soo baneynayaan fariisimaha dagaalka – Somali Top News
Ciidamada Xoogga Dalka oo ku dhawaaqay iney soo baneynayaan fariisimaha dagaalka
Ciidamo katirsan Milateriga Soomaaliya oo ku sugan Gobalka Shabeelaha Hoose waxay sheegayn in 24 saac kadib ay ka soo bixi doonaan furumaha dagaalka ee Sh/Hoose kadib markii ay waayeen garaam ama cuntadii ay cuni lahaayeen todobaadyadii la soo dhaafay.
Askartaan oo qaarkood la soo xiriiray warbaahinada ka howl galaya Muqdisho ayaa sheegay in muddo 4 bil ah aysan qaadan Mushaar, sidoo kale waxay sheegayn in carruurtoodii laga goostay biilka, guryihii ay daganaayeen laga saaray basle ay xaaladda ka sii dartay markii laga goostay garamkii ay ku lahaayeen dowladda.
Ciidamadaan ayaa sheegay in Gaajo, lacag la’aan iyo qoysaskoodii oo dayacan aysan isku darsan Karin oo ay ka soo baxayaan furamaha dagaalka.
Dad badan ayaais weydiinaya sababta ay DF-ka u bixin la’dahay mushaarka Ciidamada oo aan ka badneen 100$ halka ay u fududahay bixinta mushaarka Baarlamaanka, Wasiirada iyo shaqaalaha rayidka oo u dhaxeeyo lacag dhan 7,000$ ilaa 400$.
Ciidan gaajo heyso, carruurtii gaajo ka heyso, guryihii laga soo saaray ayaa mas’uul ka ah amniga Soomaaliya waxaana Ciidankaas la sugayaa in AMISOM ay amaanka dalka kala wareegaan 2020-ka.
← Soomaaliya oo dalka ka mamnuucday iney ka howlgalaan dhowr diyaaradood
MUSEVENI: Africa can transform into engine of world economy →